Iindaba - i-XSL20 / 1000 yagrumba i-1680 yeemitha zamanzi ashushu entwasahlobo ukunceda ishishini laseYifang
I-XSL20 / 1000 yagrumba i-1680 yeemitha zamanzi ashushu entwasahlobo ukunceda ishishini laseYifang
Ndivile ukuba umntu osuka kwiYunivesithi yaseTaiwan usinike amanzi ashushu asemthonjeni… ”Kutshanje, izixhobo zokumba amanzi eXCMG ziye zagrumba amanzi ashushu ashushu aphantsi komhlaba kwilokishi yaseXinquan, eJiangxi. Ngokuqinisekileyo!
Amanzi asentwasahlobo ashushu anikwa ubume be "aristocrat emanzini" ngenxa yeqondo lobushushu eliphezulu kunamanye umzimba kwaye iqulethe izinto eziluncedo eziluncedo kwimpilo yabantu.
Idolophu yaseXinquan imi kwiNtaba yaseWugong, indawo eyindumasi eLuxi County. Ivela "kwisipho sasezulwini", sinemithombo emininzi yamanzi kunye nezixhobo ezizodwa ze-geothermal (intwasahlobo eshushu). Nangona kunjalo, ukusukela oko ilokishi yaseXinquan yaqala uphuhliso lweprojekthi eshushu yasentwasahlobo, isixa esikhulu semithombo yoluntu kunye nezinto eziphathekayo zityaliwe, kodwa khange ibe yimpumelelo.
Emva kokuba izixhobo zifikile kwindawo yokwakha, oochwephesha ababini ababehamba nabo babemi bejonge ubusuku nemini. Emva kweentsuku ezintathu nobusuku obubini bokungaphazanyiswa kwisiseko sequla lasekuqaleni, amanzi ashushu asentwasahlobo agqitywa kubunzulu beemitha ezili-1,680. Emva kokuba imithombo yasentwasahlobo eshushu ivelise amanzi, imveliso yemihla ngemihla imalunga neetoni ezingama-500, kwaye ubushushu bamanzi ngama-55 ° C, okuhambelana neemfuno zobushushu bamanzi zokuphuhlisa imithombo eshushu.
Umzimba okhethekileyo wamanzi ngokwemvelo unempawu zeshishini elitsha lezoqoqosho ngenxa yeqondo lobushushu elikhethekileyo kunye nokunqongophala. I-XCMG iza kuphinda isebenzise ulwakhiwo kunye nomgangatho wokugrumba ukunceda amanzi aluhlaza kunye neenduli eziluhlaza zihambe ziye kwiintaba zegolide kunye neenduli zesilivere!
Impumelelo epheleleyo yeXCMG's XSL20 / 1000 yeprojekti eshushu yokumbiwa kwentwasahlobo yongeze enye imboni enomtsalane kwiWugong Mountain Scenic Area kwaye yavula iindawo ezintsha zokukhula kwezoqoqosho.
Njengoko XCMG yokuqala kakuhle amanzi kusombiwa rig e Jiangxi, XCMG XSL20 / 1000 naye waduma kwidabi lokuqala, kwaye kuye kwanconywa abathengi kunye namagosa karhulumente Xinquan.
Umatshini uxhotyiswe ngombane omkhulu ojija intloko, inkqubo yokutshintsha intonga ngokuzenzekelayo, isixhobo esenziwe ngamakhamandela, njl. Iiprojekthi zolwakhiwo olushushu olusebenzayo ziya kuvula isigaba esitsha sentsebenziswano nomzi mveliso wezenkcubeko nezokhenketho.
XCMG nzulu (amanzi) izixhobo zokumba kakuhle zisetyenziswa kakhulu kwimithombo yamanzi anzulu, imithombo ye-geothermal, imithombo yokusebenza kwemigodi, imithombo ye-methbed kunye nezinye iiprojekthi. Banokumba umgodi we-methbed, i-geothermal, i-shale gas, i-oyile engekho nzulu kunye nezinye izixhobo, kwaye zinokusetyenziselwa imithombo emi nkqo nethe tyaba. , Imithombo yesebe, imithombo yokumisa, njl njl, inokusetyenziswa kulwakhiwo lwam emngxunyeni wokuhlangula. Kumsebenzi wokuhlangula kumgodi wegolide waseShandong ekuqaleni kwalo nyaka, i-XCMG Energy Drilling kunye neMining Mining zisebenzise i-XSC1200 nzulu yokumba kakuhle njengesixhobo esenziwe ekhaya kuphela. Ukuchaneka, ukuma nkqo, umgangatho ophezulu, kunye nokusebenza ngokukuko kolwakhiwo lwazo kuyahambelana ngokupheleleyo neemveliso ezikwisiza samazwe aphesheya. Izixhobo zokumba ezinzulu kakuhle ziyafana.
Imarike yokomba kunye neyokumbiwa kwemigodi inethemba elingenamda. Ukuze kukhawuleziswe ukukhuthazwa kwe-carbon peaking kunye ne-carbon neutron, i-XCMG Foundation iya kuzibophelela ekuvuseleleni nasekwakhiweni kwezixhobo ezisekwe kwimfuno zentengiso, ukukhawulezisa uphuhliso kunye nokusetyenziswa kwamandla acocekileyo, kunye nokukhuthaza ukuguqulwa kwamandla ombane kunye namandla aphezulu -Ukuphuhliswa komgangatho wamandla amatsha. .
Ixesha Post: May-19-2021
IHydraulic Rotary Piling Rig, I-hdd rig, umatshini wokugrumba i-hdd, Umatshini wokugrumba amaqula,